जब तपाइँ कुनै पनि मान्य परीक्षणको पढ्ने बुझाइ भाग लिइरहनुहुन्छ - के यो स्याट , ACT , GRE वा अन्य चीज हो - तपाईसँग सामान्यतया कम्तिमा लेखकको उद्देश्य बारे केही प्रश्नहरू छन् । यद्यपि, साधारण कारणहरू मध्ये एक को लागी सजिलो गर्न सजिलो छ कि लेखकले मनोरञ्जन जस्तै, मनोरञ्जन गर्न वा सूचित गर्नका लागि लेखेको छ, तर एक मान्य परीक्षणमा, ती सामान्यतया विकल्पहरू तपाईले प्राप्त गर्ने विकल्पहरू छैनन्। त्यसोभए तपाईंले परीक्षण लिनु अघि तपाईंले केही लेखकको उद्देश्य अभ्यास गर्नुपर्छ।
निम्न विवरणहरूमा आफ्नो हात प्रयास गर्नुहोस्। तिनीहरूलाई पढ्नुहोस्, त्यसोभए यदि तपाइँ तलका प्रश्नहरूको जवाफ दिन सक्नुहुन्छ।
शिक्षकहरूको लागि PDF ह्यान्डआउटहरू
लेखकको उद्देश्य कार्यपत्र2| लेखकको उद्देश्य उत्तर कुञ्जी 2
लेखकको उद्देश्य अभ्यास प्रश्न # 1: लेखन
(कोरोलिना / pixnio.com / CC0)
हामीमध्ये धेरैजना (गलत रूपमा) सोच्दछौं कि लेखकहरू बस बस्छन् र एक बुद्धिमान निबन्ध, कथा वा कविता एक प्रतिभा र प्रेरणाको फ्लैशमा बसिरहेका हुन्छन्। यो सही छैन। अनुभवी लेखकहरूले सुरूबाट लेखन प्रक्रियालाई स्पष्ट कागजात लेख्न मद्दत गर्न समाप्त गर्न प्रयोग गर्दछ। यदि तपाइँ चरणहरूमा तपाईंको रचनामा प्रतिबिम्बित हुनुहुन्न र तपाईले यसलाई विकास गर्नुभएका परिवर्तनहरू परिवर्तन गर्नुहुन्न भने, तपाईंले यसलाई सबै समस्या वा त्रुटि देख्नुहुने छैन। एउटा निबन्ध वा कथा मात्र एकपटक लेख्न र कोठा छोड्न प्रयास नगर्नुहोस्। यो नौसिखिया लेखकहरूले गल्ती गरेको छ र चमकसाथ एक अनुभवी पाठकलाई स्पष्ट हुनेछ। रहनुहोस् र आफ्नो काम हेर्नुहोस्। तपाईंले रचना गर्नुभएको कुरालाई विचार गर्नुहोस्। अझ पनि राम्रो, एक लेखन प्रक्रिया प्रयोग गर्नुहोस् जहाँ तपाइँ पूर्वनिर्धारित र योजना बनाउनुहोस्, कुनै न कुनै ड्राफ्ट लेख्नुहोस्, विचारहरू, सम्पादन र प्रमाणपत्र व्यवस्थित गर्नुहोस्। तपाईंको लेखनले अन्यथा गरीब शिल्पकारिताको नतिजालाई दुःख पार्नेछ।
लेखकले प्राय: अनुच्छेद लेखे:
A. कुनै व्यक्तिको लागि प्रक्रिया प्रक्रिया को व्याख्या गर्नुहोस् जुन कमेन्टले यो अनुभव गरेको छ।
B. सुझाव दिनुहोस् कि नयाँ लेखकहरूले आफ्नो कामको शिल्पको लागि लेखन प्रक्रिया प्रयोग गर्छन्।
सी लेखन प्रक्रिया को घटक को पहिचान र संरचना मा शामिल को सबै भन्दा राम्रो तरीका।
D. एक नयाँ लेखकको लेखनको अनुभवी लेखकको साथ तुलना गर्नुहोस्।
लेखकको उद्देश्य अभ्यास प्रश्न # 2: गरिब बच्चा
एक राजमार्गमा, विशाल बगैंचाको ढोका पछि, जसको अन्त्यमा सूर्यको बत्तीमा लुगा लगाइएको सुन्दर सुन्दर घरको सेतो हेल्प, एक सुन्दर, ताजा बच्चा थियो, ती देशको कपडामा लुगा लगाइयो जुन धेरै सुन्दर छ। विलासिता, परवाह बाट स्वतन्त्रता, धनको आदम्य दृष्टि यस्तो बच्चाहरु लाई यति सुन्दर बनाउन को लागी कि उनि मध्यस्थता र गरिबी को बच्चाहरु देखि एक फरक पदार्थ को मोल मा विचार गर्न को लागी परीक्षा ले रहे हो।
त्यसोभए उनको घाँटीमा झुण्डिएको एक विशाल खिलौना थियो, यसको मालिकको रूपमा ताजा, पोर्टेबल, गिल्ड, क्लिमोन क्लोकमा चक्कु र प्लेट र गिलास मोतीहरू संग ढाकिएको थियो। तर बच्चाले आफ्नो मनपर्ने खिलौनेको कुनै सूचना लिइरहेका थिएनन्, र यो उहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ:
गेटको अर्कोतिर, नेटलल र थोरै बीचमा, अर्को बच्चा, गहिरो, बिरामी थियो, वेदीको साथ सुत्केरी, एक पिराह-बच्चाहरु मध्ये एक जसमा एक निष्पक्ष आँखा सुन्दरता पत्ता लगाउँथ्यो, आँखाको रूपमा एक connississeureur चर्बी को एक तह को तल एक आदर्श चित्रकारी को ईश्वरीय हुन सक्छ, यदि केवल गरीबी को बदसूरत पितृ को धोखा दिए। चार्ल्स बेउडेलियर द्वारा "गरीब बाल को खिलौना"
लेखकले सम्भवतः अन्तिम अनुच्छेदमा निर्मूल भएको बच्चाको भौतिक रूपलाई उल्लेख गर्न:
ए बच्चाको गरिबी को कारण को पहिचान।
B. बच्चाको प्रति पाठकको सहानुभूति प्रतिक्रियालाई तीव्र बनाउनुहोस्।
सी सामाजिक उत्पीडन को आलोचना गर्छन कि बच्चाहरु लाई यस्तो तरिका मा पीडित को अनुमति दिइनेछ।
D. पहिलो विशेषाधिकारको साथ दोस्रो बच्चाको गरिबीको विपरीत।
लेखकको उद्देश्य अभ्यास प्रश्न # 3: प्रविधि
घडीहरू र कार्यक्रमहरू, कम्प्यूटरहरू र कार्यक्रमहरूको उच्च प्रविध संसारले हामीलाई त्रास र अशांतिको जीवनबाट मुक्त गर्न थालेको थियो, तर हरेक दिनको दौरामा मानव जाति अधिक दावी, शोषित, र पीडित हुन्छ। लाखौं भिक्षु हुँदा भित्तामा बाँच्न सकिन्छ। मानव जाति आफैंबाट अलग रह्यो र यसको प्राकृतिक संसार भनेको प्राकृतिक संसारबाट बिग्रियो।
अब हामी कृत्रिम समय संसार आर्केस्ट्रेट गर्दछौं, सिलिकन चिप्सका इलेक्ट्रोनिक सर्किटहरू जिप गर्न जगेडा गर्छौं, एक समयको संसारले कहिलेकाहीँ फलफूल पकाउन सक्छ, वा लुगा लगाउने गर्दछ। हामी प्रकृति को समय को दुनिया को बाहिर देखि बाहिर फैलयो छ र एक निर्मित समय दुनिया मा जहां अनुभव सिमुलेटेड हुन सक्छ तर अब स्वाद छैन। हाम्रो साप्ताहिक तालिकाहरू र कामको जीवन कृत्रिम तालहरू, परिप्रेक्ष्य र शक्तिको असहमति संघको साथ पतन गरिन्छ। र प्रत्येक नयाँ बिजुली बिजुली र धुराको साथ, हामी एकअर्काबाट थप बिभिन्न स्थानमा पुग्छौं, अधिक पृथक र एक्लो, अधिक नियन्त्रणमा र कम आत्म-आश्वासन दिन्छौं। - " टाइम युद्ध" जेरेमी राइकिकिन द्वारा
लेखकको पहिलो अनुच्छेद मुख्यतः निम्न कार्य गर्दछ:
ए मानव जीवन को व्यवस्थित गर्न को लागी प्राथमिक विधियों को पहिचान।
B. टेक्नोलोजी आलोचना गर्दछ किनकी यसले मानिसहरुलाई प्राकृतिक संसारबाट फर्काउँछ।
C. प्रविधिको प्रयोग गरी मानिसहरु को शोषण गर्ने तरिकाहरु को वर्णन गर्नुहोस्।
D. वर्णन गर्नुहोस् कि कसरी मानिसहरुले प्राकृतिक संसारबाट विभाजन गरेका छन् र यसको अनुकुलन प्रविधि छ।
लेखकको उद्देश्य अभ्यास प्रश्न # 4: जहाजवाट
(अमेरिका को भूमि प्रबंधन को आंतरिक ब्यूरो विभाग)
जब अधिकांश मानिसहरू जहाज जहाजको बारेमा सोच्छन्, उनीहरूले कल्पना गर्छन् कि ठूलो काठ वा धातुको डुङ्गा समुद्रको तलल्लो छेउमा दुर्घटनाग्रस्त भयो। मंगलबार डुङ्गाको खोपबाट बाहिर निस्कियो र कोरल र समुद्री तरकारीको छेउमा पसेको छ। यसबाहेक, स्कूबा गियर र क्यामेराहरूसँग विविध विविधताहरूले लामो समयसम्म बिर्सिएको पोतभित्रको अन्वेषण गर्न गहिराइमा पुर्याए। उनीहरूले पुरानो बर्तनबाट सुनको भित्तामा समुद्री डाँडामा कुनै चीज खोज्न सक्दछ, तर एक कुरा निश्चित छ: गहिरो ठुलो पानी जहाज निगल भएको छ र धेरै लामो समयको लागि गोपनीय राखिएको छ।
आश्चर्यजनक कुरा, यद्यपि, जहाज सधैं जहाज जहाजको अन्वेषणमा आवश्यक तत्व छैन। केही व्यक्तिलाई एहसास छ कि भूमिमा धेरै महत्त्वपूर्ण जहाज जहाज भेट्टाउन सकिन्छ। व्यापारिक झगडाहरू, युद्धशास्त्रहरू, र समुद्री डाकू समानहरू समान रूपमा विश्वभरभरि नदीबेटीहरू, पहाडी पहाडहरू र कर्नेलहरूमा गफिन्छन्।
लेखकले प्राय: यी दुई अनुच्छेदहरूलाई क्रमबद्ध गर्न:
ए पाठकलाई आश्चर्यचकित ठाउँहरूको बारेमा चिन्ता गर्नुहोस् कि जहाज जहाजहरू भेटिएका छन्।
बी वर्णन गर्नुहोस् कि एक व्यक्तिले पत्ता लगाएमा के उसले जहाजको जहाजमा पुग्यो भने।
सी पानी मिलिएको जहाज जहाज र भू-सम्पत्ति जहाज जहाज बीच समानता तुलना गर्नुहोस्।
डी खोज्न को लागी नयाँ स्थान संग आश्चर्यचकित गरेर जहाज को जहाज को खोज को तेज।
लेखकको उद्देश्य अभ्यास प्रश्न # 5: पोषण
प्रत्येक पल्ट एक व्यक्तिले आफ्नो मुखमा खानको लागि खोल्छ, उसले पोषणको निर्णय गर्दछ। यी चयनले व्यक्तिलाई कसरी हेर्छ, महसुस गर्दछ, र काम वा खेलमा प्रदर्शन गर्दछ मा एक निश्चित भिन्नता दिन्छ। जब ताजा फल जस्ता राम्रो वर्गीकरण, फलफूल सब्जियां, सम्पूर्ण अन्न र दुबला प्रोटीनहरू चयन गरिन्छ र खाएको हुन्छ, परिणामहरू स्वास्थ्य र ऊर्जाको लागि वांछित स्तरको सम्भावना हुन सक्छ जुन आवश्यक को रूपमा सक्रिय हुन अनुमति दिन्छ। त्यसोभए, जब विकल्पहरू प्याकेज गरिएका कुकीजहरू, पटाखेहरू, र सोडसहरू, प्रोसेसरहरू जस्तै प्याज गरिएका कुकीजहरू, पटाखेहरू र सोडाहरू हुन्छन्, समात्ने वस्तुहरू, शंकुहरू, हाइड्रोजन गरिएको वसा, रसायन र संरक्षकहरूबाट भरिएको वस्तुहरू - जुन सबै ठूलो मात्रामा हानिकारक हुन सक्छन् - परिणामहरू खराब स्वास्थ्य वा सीमित ऊर्जा हुनसक्छ वा दुवै ।
अमेरिकी आहारहरूको अध्ययन, विशेष गरी धेरै जवानहरूको आहारले असामान्य आहारको आक्रोशलाई बुझाउँछ, जसलाई वजन र बाहिरको आकारका केटाकेटीहरूको संख्याले बताउँछ। आमाबाबु, जो आफ्नो बच्चाहरु को आहार को आदान-प्रदान को रूप मा मानिन्छ, प्रायः आफ्नो छोराछोरी को पोषण को विकल्प छोड्छ, जो स्वस्थ निर्णय को लागि पर्याप्त जानकारी नहीं दी जान्छ। यदि आज संयुक्त राज्य अमेरिका मा बचपन मोटापा संकट को लागि दोषी छ भने, यो आमाबाबु छ जो आफ्नो बच्चाहरुलाई पोषण भोजन दिवालिया खाना खाने को अनुमति दिइन्छ।
लेखकले प्राय: "शंकुहरू, हाइड्रोजनयुक्त वसा, रसायन र संरक्षकहरूसँग भरेको वाक्यांश प्रयोग गर्दछ - जुन सबै ठूलो मात्राहरूमा हानिकारक हुन सक्छ"
ए संयुक्त राज्यमा बढ्दो मोटापे संकटको आलोचना।
B. संयुक्त राज्य अमेरिकाका बालबालिकाहरूमा स्वस्थ छनौटहरूको साथमा खराब विकल्पहरू।
C. प्रसोधित खाद्य पदार्थ मा अग्रणी रसायन को पहिचान गर्छन ताकि मान्छे जान्दछ कि कसरि बचान को लागि।
D. प्रसोधनित खानाहरूको नकारात्मक प्रतिक्रियालाई तीव्र बनाउनुहोस्।
जर्मन क्रियाकलाप: जर्मन उपन्यासकार I, II को कसरी पहचाना
एक अद्वितीय मंगा क्यारेक्टर सिर्जना गर्नुहोस्
अमेरिकी यहूदी विश्वविद्यालय प्रवेश
नट्स, चकहरू, वायर्ड पागल र माइक्रो नट्सको बारे सबै
एउटा ट्री पहिचान गर्न यी ट्री पार्ट्स प्रयोग गर्नुहोस्
"ईयु बोईटे" लाई फ्रान्सेलीमा के मतलब छ?
असम्भव रंगहरू र तिनीहरूलाई कसरी हेर्ने
Moray Eels - तथ्याङ्क र जानकारी स्कूबा डाइवर्स्सका लागि
ग्वाइलाइट सीरीज - के यो उमेरको लागि यो उपयुक्त छ?
रेपप Victim तर बलात्कार सर्भर, भाग I - रेनी डीवीएटी स्टोरी
क्याम्प डेभीड 1978 को के थियो?
फ्रान्सेली पार्ट्स भाषण
कसरि कन्जेगेट "डिस्कोउरियर" (डिस्क, अनलक गर्न)
पूर्वोत्तर GPA, SAT र ACT डेटा
ग्रीक शीतकालीन हलचल समारोहहरू
बाइबलमा प्रतिज्ञा गरिएको भूमि
यस डोर्जी शगेन विवादास्पद
रंगीन पेंसिलको साथ धातु कसरी आकर्षित गर्ने?